पहिरोले खाँदबारीमा एक घर पु-यो, चिचिलामा १० घर विस्थापित « Makalu Online – Leading News Portal from Province 1
पहिरोले खाँदबारीमा एक घर पु-यो, चिचिलामा १० घर विस्थापित
संखुवासभा । जिल्लाको विभिन्न स्थानमा निरन्तर परेको बर्षाका कारण गएराति गएको पहिरोबाट क्षति पुगेको छ । पहिरोले खाँदबारी नगरपालिका–६, खिप्रीङमा एक घर पुरेको छ । सो स्थानका अन्य घरहरुपनि उच्च जोखिममा रहेको छ ।
नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरु विहानैबाट अनुगमन तथा व्यवस्थापनमा लागेको छ । पहिरोको जोखिम बढेपछि घरमा रहेका उनीहरु आफन्तकोमा बसेका थिए । हालसम्म मानविय क्षति भने भएको छैन । सो स्थानमा गएको पहिरोका कारण कृषि उपज उत्पादन बगाएको छ । धान, मकै लगायतका उत्पादनहरु काम नै नलाग्ने गरि बगाएको खाँदबारी नगर प्रमुख महेश थपलियाले जानकारी दिए । उनले जोखिममा रहेकाहरुलाई व्यवस्थापन र राहतको व्यवस्थापनमा जुट्ने बताए ।
यता चिचिला गाउँपालिका वडा नं. १, ३ र ४ नं. वडाका १० घर विस्थापित भएका छन् । विस्थापित परिवारलाई सामुदायिक भवन तथा आफन्तहरुको घरमा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पशाङ नुर्वु शेर्पाले जानकारी दिए । कसैको घरको आगनहरु बगाएको, घर वरिपरि सानातिना पहिरो गएको छ । गाउँपालिका र सुरक्षा निकायबाट अनुगमन भईरहेको छ । भने अझै विस्थापितहरु बढ्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ ।